[Ukara] dr.fone - iOS Private Data nchicha: nchicha iPhone-adịgide adịgide
dr.fone Toolkit - iOS Private Data nchicha
Easily Hichapụ gị Personal Data si gị Device
Simple, pịa-site, usoro.
Ị họrọ nke data na ị chọrọ ihichapu.
Your data na-na-adịgide adịgide ehichapụ.
Ọ dịghị onye nwere ike mgbe naghachi ma na-ele gị onwe data.
Ihicha ozi nkeonwe gị ga-echebe gị si njirimara ohi. dr.fone Toolkit - iOS Private Data nchicha ga iṅomi ngwaọrụ gị maka onwe data na-ekwe ka ị na-ahọrọ ihe na-adịgide adịgide ehichapụ.
Ihe niile bụ ihe Erasable
Photos, ozi, kọntaktị, na ndetu, Safari ibe edokọbara na gị oku akụkọ ihe mere eme bụ nke ihe ndị nwere ike na-ehichapụ. Data ehichapu-eji nke a iOS Private Data nchicha nwere ike mgbe a ga-natara.
Ichicha iPhone: Iṅomi na ịhụchalụ gị onwe data for free
Ị nwere ike iji nke a iPhone nchicha ka iṅomi ngwaọrụ gị na ịhụchalụ niile hụrụ onwe ozi otu otu. Ọ bụ n'ihi na free.
Ichicha iPhone: Ma ehichapụ na ẹdude nzuzo bụ checkable
Ọ bụghị nanị na Michael na ihicha ẹdude onwe data na ngwaọrụ gị, ma na-ahụ gị na recoverable onwe ozi na gị iPhone ma ọ bụ iPad, na ichicha ya na-adịgide adịgide nke na ọ dịghị onye nwere ike Chọpụta ya.
Ichicha iPhone: Ike ihichapu ọtụtụ onwe data
Nke a iPhone nchicha enyere gị ihichapu onwe data dị ka photos, ozi, kọntaktị, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ndetu, kalenda, ihe ncheta na Safari ibe edokọbara.
Ichicha iPhone: 1 click ihichapu niile ma ọ bụ bibiri ndị ichicha ihe dị ka ị chọrọ
Ị nwere ike ịlele dum Doppler N'ihi na ichicha niile data na otu click. Ma ọ bụ i nwere ike bibiri ichicha ihe na ị na-achọghị na-.
Ichicha iPhone: ichicha niile iPhone, iPad na iPod aka
N'agbanyeghị na ị na-eji ọhụrụ iPhone 7, iPad Pro, ma ọ bụ ochie iPhone 4, iPad 1, a iPhone data nchicha bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka.
100% Nchekwa Nkwa
Nke a iPhone data nchicha kpamkpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Ihichapu ọ bụla iche iche nke Nzuzo na gị iPhone / iPad
Gịnị ka ị pụrụ ichicha gị iPhone? Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a ihichapu onwe ozi na gị na iPhone, gụnyere photos, ozi na Mgbakwụnye, kọntaktị, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ndetu, kalenda, ihe ncheta na Safari ibe edokọbara.
dr.fone si nkwa
Your data bụ nchebe.
3 mfe nzọụkwụ.
Ehichapu data na-ruo mgbe ebighị ebi.
All ụdị nke iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad
oku akụkọ ihe mere
Safari si ibe edokwubara
iOS 10.3, iOS 10, iOS 9 na mbụ
Exellent na beautifull na nnọọ importaint mmemme.
Zọpụtara The Day. Worth arọ ya na gold. Daalụ.
A ga-enwe ma ọ bụrụ na ị na-efu data!
Zuru okè ngwaahịa arụ ọrụ dị ukwuu maka iphone.
Olee otú Kpamkpam usoro iPhone
Olee otú ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị site na iPad
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ Text Ozi si iPhone
Olee ihichapu All Content na Ntọala na iPhone
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ All Content Tupu ere gị iPad
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ Call History na iPhone
Olee otú iji Gbochie / Clear Ozi na iPhone
Olee otú iji Gbochie History na iPhone
Anyị ọrụ na-Ọzọkwa nbudata:
Easily ichicha All data site na ngwaọrụ gị. Ọ dịghịkwa onye nwere ike mgbe naghachi ma na-ele gị data.
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ site na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka.
WhatsApp Nyefee, ndabere & Weghachi
Mbupụ gị WhatsApp ozi gị iPhone, iPad, iPod aka, gam akporo ngwaọrụ, ma ọ bụ kọmputa na-ike a ndabere.